Itoobiya: Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u habaynta dhulka? – Madal Furan
Hoy > Warka > Itoobiya: Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u habaynta dhulka?
Itoobiya: Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalidu ma ku guulaysan karaa ololaha dib u habaynta dhulka?
Editor September 27, 2018 0
Madal Furan – Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa wacad ku maray inuu dhawaan bilaabi doono baaritaan baahsan oo ku aaddan dhul uu sheegay in si sharci-darra ah lagu boobay iyo guryo uu maamulku sheegay in boob lagu dhistay.
Hadalkan ayuu madaxa maamulkaasi, Mustafe Muxumed Cumar, waxa uu ku shaaciyay bartiisa Facebook-ga, waxaana uu ku sheegay in lala wareegi doono lana siin doono ciddii laga boobay.
Mustafe Muxumed Cumar waxa uu intaasi ku daray “Ilaa hadda dhul iyo hanti badan oo ay boobeen dad aan Soomaali ahayn oo u badan saraakiil ciidan ayaan xogtooda oo dhamaystiran gacanta ku haynaa. Dhakhso ayaan talaabo u qaadi doonaa lagula wareegayo hantidii shacabka laga boobay.”
Haddaba isagoo ka duulaya qoraalkaasi madaxa maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar, ayaa maamulka magaalada Jigjiga waxa uu sheegay in uu ku dadaalayo xallinta muranka ka dhashay dhul uu sheegay in si sharci darro ah uu u bixiyay maamulkii hore ee dowladda degaanka.
Arrintan oo uu maamulku sheegay in ay dhibaato badan ku hayso ayuu ku-xigeenka maayirka magaalada Jigjiga, ahna ku simaha duqa magaaladaasi, Dayib Muxumad Jaamac, waxa uu BBC-da u sheegay in ay soo celin doonaan dhulkaasi ay sheegeen in sida khaladka ahi lagu bixiyay.
“Annagu qorshahayagu waxa weeye in nidaam sharci ah loo maro cabashooyinka dhulka la xiriira, annagoo iska kaashanayna Dowlad Deegaanka innaanu ka wadashaqeyno wixii sharci-darro ku baxay in qaab sharci ah haddana lagu soo celiyo.” ayuu yiri Dayib Muxumed, ku-xigeenka maayirka magaalada Jigjiga
Hasayeeshee waxa ay su’aali ka taagan tahay qaabka sharci ahaan loo wajihi karo dhul xukuumad bixisay oo sharci leh, middaas oo uu maayir ku-xigeenku sheegay in nidaamka degsan un lagu kala bixi doono “Horta waxan waa la kala saari doonaa, wax wuxuu noqon doonaa nidaamka sharciga waafaqsan, waxna wuxuu noqon doonaa waxaan nidaamka sharciga loo marin waafaqsanaynna.”
Maamulka magaalada Jigjiga ayaa sheegay inay jiraan rag iska xirtay kumannaan mitir “Ninkii dhulkaas sheeganayayna uu bannaanka ku ooyayo oo uu leeyahay waa la i dhacay, xoog baa la iiga qaatay, waa la i xiray.” ayuu yiri Dayib Muxumed.
Howl aanan laga bixi karin
Magaalada Jigjiga ayaa waxaa la sheegaa in inteeda badan ay ahaan jirtay dhul beereed ay dad gaar ah kala lahaayeen oo weliba ku soo gaaray qaab dhaxal ah.
Dad badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin in arrinta dhulka ay tahay waxa ugu daran ee caqabadda ku keeni kara Dowladda Deegaanka Soomaalida ee curdunka ah.
Waxa ay fikirkooda u tiirinayaan in dhulka ay horay dowladi u bixisay oo si weyn loo maalgashtay, halka ay jiraan kuwo ku doodaya in dadka lagu tuhmayo in dhulka intiisa badan ay haystaan dad weli awood ku leh deegaanka, sida qaar ka mid ah saraakiisha milateriga Itoobiya.
Xuseen Cali, waa mid ka mid ah dad ka yimid qurbaha, waxa uu aaminsan yahay in arrintaasi ay adkaan doonto “Dhul fara badan baa la bixiyay oo xukuumadihii hore ay bixiyeen say u kala horreeyaanba, dhulkaa la bixiyayna horta waa la dhisay 80% ama dowladdu ha dhisto ama cid maalgashato ah ha dhisato, laakiin waa dhul maanta hanti gashay oo la dhisay.”
“Waa ay adkaanaysaa in dhulkaas la dhaho dib baa loo celinayaa, teeda kale dowladiba dowladda ay ka horraysay haddii ay dhahdo tallaabada ay qaadday waan burinayaa caqabad bay waddanka u keenaysaa.” ayuu yiri Xuseen Cali.
Arrintaase waxaa gaashaanka u daruuray Dayib Muxumad Jaamac, maayir ku-xigeenka magaalada Jigjiga, kaas oo sheegay in “Shakhsiyaadka dhul aan munaasab ahayn gacanta ku dhigay ama ciidan ha ahaado ama shakhsi kale oo si maalgashi ahaan ah ku qaatayba ha noqotee, iyadoo la raacayo siyaasadaha dalka u yaal waa ay iska fududaan doontaa koley.”
Maayir Dayid Muxumed waxa uu intaasi ku daray “Waddanka sharci baa jira dhulka lagu bixiyo taas unbaa qofwalba loo eegi, haddii qofku marka si boob ah iyo si xaqdarra ah uu ku qaatay, waa la eegi sharciga unbaana la marin.”
Hasayeeshee waxaa jira dad badan oo arrintaasi la dhacsan oo ku doodaya in cadaaladda ay dadka oo dhan ay wadagaarto.
Xildhibaano DFS oo shirar iska soo horjeeda ka wada magaaladda Nayroobi